နည်းပညာများ လေ့လာရန် :: melodykgmalay
မယ်လိုဒီကောင်မလေး > နည်းပညာများ လေ့လာရန် အခမဲ့ E-mail များ ရယူရန်
www.emailaccount.com Domain များစွာကို စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီး လွယ်ကူသုံးချရသော အခမဲ့ mail ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်၊
www.gawab.com Language များစွာ စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီး အခမဲ့ မေးလ် ဖြစ်သည်၊
www.inbox.com သုံးကောင်းပြီး လိုင်းဝင်ထွက်လွယ်ကူမြန်ဆန်သည် 5GB ပေးထားသော FreeMail ဖြစ်
www.hotmail.com မိုက်ကရိုဆော့မှ လွှင့်တင်သော ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်
www.myway.com အလှဆုံးသောပြင်ဆင်မှုများ ရရှိနိုင်သည်၊
www.dora.com ပြင်ဆင်ပုံတစ်မျိုးနှင့် မြင်တွေ့နိုင်သည်၊
www.gmail.com အခမဲ့မေးလ်ဝန်ဆောင်မှု အခမဲ့မေးလ်
http://mail.yahoo.com အတန်အတင့်နာမည်ရှိသော မေးလ်
www.mail2world.com Spam တော့နဲနဲဝင်တတ်တယ်၊
www.30gigs.net 30GB ရရှိနိုင်သော မေးလ်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်၊
www.spamato.net Spam ကြောက်ရင် ဒီမေးသုံးကြည့်ပါ၊
www.mymyanmar.net Gmail သုံးလျှင်ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာဖောင့်လိုလျှင်ဖြစ်ဖြစ် အခမဲ့ရယူနိုင်သည်
www.alphamandalay.com.mm Gmail သုံးလျှင်ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာဖောင့်လိုလျှင်ဖြစ်ဖြစ် အခမဲ့ရယူနိုင်သည်
www.myanmartalk.net Gtalk ကဲ့သို့ Mtalk ဖြစ်ပါသည်၊
Gtalk အသုံးပြုသူများ သိထားရန် ဂျီတော့ ချက်ရွန်းတွေကနေ နည်းပညာလက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါ အလွယ်တကူဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် တင်ပြပေးလိုက်တာပါ----
မူရင်းနည်းပညာရှင်ရဲ တိုက်ရိုက်ပေးပို့မှုမဟုတ်တဲ့အတွက် ဆိုဒ်ပညာရှင်ရဲ့နာမည် မညွန်းပေးနိုင်တာကို နားလည်ခွင့်လွတ်စေချင်ပါသည်....
လေ့လာရန် အောက်ကအချက်အလက်လေးတွေကို သေချာလုပ်ဆောင်ပါ.. 98% protect ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်...
အရင်ဆုံး ဆိုင်သုံး ဘော်ဒါတွေအတွက် အရင်ပြောပြပေးပါ့မယ်...
ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်မှာသုံးမယ် ဆိုရင် ..
anti virus software တင်ထားလားကြည့်ပါ မတင်ထားရင်လုံးဝမသုံးပါနဲ့ .....
-ပြီးရင် website တွေမှာ မန်ဘာ လုပ်မယ်ဆိုရင် မိမိ အကောင့်ပတ်စပေ့ါကို လုံးဝမပေးဘဲနဲ့ တစ်ခြား
-firefox ကိုဖွင့်ပါ.. tools > options>security
ပြီးရင် remember password for sites. မှာအမှန်ခြစ်ပေးထားရင်ဖြတ်ပါ.. အဲ့ကောင်တွေက သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ပြသနာတတ်တတ်ပါတယ်..
မိမိသုံးနေတဲ့ စက် တည်းက Control Panel ကိုသွားပါ.. user account တည်းကိုသွားပါ..
ပြီး၇င်အောက်မှာ computer adminstrator နဲ့ Guest account ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်။.။. အဲ့နေရာမှာသုံးခု ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်ပြီးစိတ်မချရပါဘူး ...။ဒါကလည်း တကယ် network ကျွမ်းကျင် သမားတွေသာ ၀င်ကလိနိုင်တဲ့နည်းပါ.. ဘယ်လိုဘဲဝင်ကလိသော်ငှားလည်း anti virus software အသုံးပြု့ ထားလို့ 
trojan သွင်းပြီး ပတ်စပေ့ါ ခိုးဖို့ သိပ်မလွယ်လှပါဘူး..
ဒီနေ ရာမှာ anti virus software တွေတည်းက ...
kasper sky 2011 , Macfee , AVG စတဲ့ ပာာတွေကို ပိုမိုသုံးသင့်ပါတယ်..
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ တွေကွန်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာ website ပေါ်တတ်ပြီးချက်တင်ထိုင်ကြတာပါ..ဒါကလည်း အမြဲတမ်းလိုလိုမကောင်းပါဘူး.. ဥပမာwww.karoolark.com လိုဆိုဒ်မျိုးတွေပေ့ါ.... တကယ်အသုံးဝင်လှပါတယ်.. ဒါပေမဲ့လည်း တစ်ချို့ ပာက်ကာ တွေက အဲ့လိုဆိုဒ်မျိုးကို ပာက်ကြတယ် ပြီးရင် သူတို့ တွေ ကုဒ် တင်း တစ်ချို့ ထည့်သွားခဲ့တယ်.
ပြီးရင် သူတို့ တွေ မေးလ် လိပ်စာတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်သွားကြတယ်..သူတို့ ပာက်သွားတဲ့ ဆိုဒ်တွေက နေပြီးတော့ ၀င်သုံးတဲ့အကောင့်တွေပာာဆိုရင် သူတို့ မေးလ် တည်းကို သွားပို့ ပေးပါတယ်... password တွေပါအပါအ၀င်ပေ့ါ...
-နောက်တစ်ခုကလည်း သတိလက်လွှတ်ဖြစ်သွားကြတာပါ။ G-Talk ၀င်ရင် remember password ကိုအမှန်ဖြစ်ပေးပြီးဝင်ကြတာ ပါ.. ဒါပာာ မျှဝေချင်းတစ်မျိုးပါဘဲဗျာ.. ကိုသုံးပြီးထသွားရင် စက်ကို နောက်သုံးတဲ့သူက ကို့ အကောင့်ကို ရသွားနိုင်ပါတယ်... လက်စလက်န၇ှိတဲ့သူတွေဆိုပိုဆိုးပါတယ်...
seepassword ကဲသို့ သောဆော့ဝဲလ်လေးနဲ့ သင့် ပက်စပေ့ါ အစက်လေးတွေကို ထောက်ကြည့်လိုက်ရင်မတွေးရဲ့ စရာပါဘဲ....
-မိမိ အကောင့်ပတ်စပေ့ါကိုပေးတဲ့အခါပာာလည်း အ၇မ်းကို အရေးကြီးပါတယ်..
စတာတွေကိုလုံးဝမပေးသင့်ပါဘူး။ ပတ်စပေ့ါပေးမယ်ဆိုရင်လည်း 16လုံးအထက်ပေးသင့်ပါတယ်...
20 ကျော်ရင်တော့ မဆိုးဘူးခေါ်နိုင်ပြီး ။ 25လုံးကျော်ပေးထားရင် တော်တော်ကောင်းသွားပါပြီ။
ပတ်စပေ့ါပေးတဲ့နေရာမှာလည်း ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + စတာတွေကို ထည့်သွင့်ထားသင့်တဲ့အပြင်
ပက်စပေ့ါတည်းမှာဘဲ စာလုံးအကြီးအသေး ပူးတွဲပေးသင့်ပါတယ်...
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ လုံးဝ အကောင့်ကိုဖမ်းမမိတဲ့အချိန်မှာ username သိယုံနဲ့ ပာက်လို့ ရတဲ့ဆော့ဝဲလ်တွေ၇ှိပါတယ်.... သူနဲ့ သာ ထိုင် crack မယ်ဆိုရင် သင့်ပက်စပေ့ါပာာလွယ်နေခဲ့ မယ်ဆိုရင် ...
-အခုနောက်ပိုင်း အဆိုးဆုံးနည်းလေးတစ်ခုပါ.. hacking နဲ့cracking ပိုင်းကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေအများဆုံးထိပါတယ်... ပာက်ကင်းတုးတွေသာဆို ရင် anti virus ဆော့ဝဲလ် တွေကိုပိတ်ပြီး run ကြပါတယ်... ဒါပာာ တစ်ဖက်သူကို လက်ပြခေါ်သလိုပါဘဲ...
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အခုနောက်ပိုင်း hacking tools နဲ့cracking tools တွေမှာ trojan horse တွေကပ် ထည့်လာကြတယ်ဗျ.. ကိုကတော့ အရင်တိုင်းဘဲ anti virus လေးပိတ်ပြီး run ချလိုက်တယ်.. အဲ့အချိန်မှာ ကို့ စက်တည်းမှာ၇ှိသမျှ ပက်စပေ့ါတွေအကုန်ပါသွားပါလေရောဗျာ... ပြီးတော့ တစ်ချို့ ပာာတွေဆိုရင် start up တည်းပါဝင်ပြီးလုပ်ချလိုက်တယ်.. စက်ကိုဖွင့်တာနဲ့ အဲ့ကောင်ပါ run နေကောဗျာ...ဒီတော့ အဲ့လိုမခံရအောင်ဗျာ... ပာက်ကင်းနဲ့ ခရက်ကင်းပိုင်းတွေလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် vnware တည်းမှာစမ်းစေချင်ပါတယ်...
ဒါမှမပာုတ်ရင်လည်း အင်တာနက်ချိတ် စက်ထားခြင်းမရှိတဲ့ PC တစ်လုံးမှာစမ်းစေချင်ပါတယ်...
အဲ့အချိန်တွေမှာ kasper sky 2011 ကအကောင်းဆုံး ပါဘဲလို့ ဆိုချင်ပါတယ် ....
-အင်တာနက် စသုံးတဲ့ဘော်ဒါတွေ ထိတဲ့နည်းလေးပါ..
ဖေး၇ှင်းနည်းပါ.. (page အတုနည်းလို့ လည်းခေါ်ပါတယ်..)
အဲ့လိုပေ့အတုတွေတည်းကိုဝင်လိုက်တာနဲ့မိမိ အကောင့်ပတ်စပေ့ါတွေ ပာာအလိုလိုပါသွားပါပြီ..
ဥပမာအနေ နဲ့ အောက်ကလင့်မျိုးကိုသွားကြည့်လိုက်ပါ...
အဲ့မှာသင်တို့အကောင့်နဲ့ ဝင်ဖို့ ဘောက်တွေပေးထားပါတယ်...လုံးဝမ၀င်မိစေဖို့ ပါဘဲ ၀င်ပေးလိုက်တာနဲ့ ကို့ အကောင့်ပာာအော်တို ပါသွားပါတယ်...အဲ့လင့်လိုမျိုးနမည်မတူတာတွေများစွာ၇ှိပါတယ်..မ၀င်မိကြပါစေနဲ့ ခင်ဗျာ..
ဒီတော့ Mail စစ်ကြမယ်ဆိုရင်လည်း ...
https://www.gmail.com မှာဘဲဝင်စစ်ပါ တစ်ခြားသော နေရာတွေက ၀င်စစ်ခြင်းမျိုးမလုပ်ဖို့ ပါဘဲ...
ဘယ်လို page မျုိးဘဲလာလာပါစေ.။။ မိမိ အကောင့်နဲ့ပက်စပေ့ါကို ရိုက်ထည့်ခြင်းမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ ခင်ဗျာ...
G-mail (account) ကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ
ဒီနေရာမှာ Close account and delete all service and info associated with it ကိုရွေးလည်းရပါတယ်။ဒီလိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် ဖျက်ချင်တဲ့အကောင့်နဲ့သက်ဆိုင်သမျှ
facebook အကောင့်ကို မသုံးချင်တော့လို့ ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင် facebook အကောင့်ကို မသုံးချင်တော့လို့ ဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်
Gtalk2ခု ဖွင့်မရပါက ဂျီတော့ ၂ ခုဖွင့်နည်း
မနေ့တုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောတယ်။ ဂျီတော့ က ၂ ခု ဖွင့်လို့ရတယ်တဲ့။ ကိုယ်ကတော့ စိတ်မ၀င်စားတော့ သိပ်မစမ်းဘူး။ သူကတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးသွားတယ်။ Start Menu ထဲက ဂျီတော့ icon လေးကို right click လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် properties ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို box တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ်။ Target နေရာက နောက်ဆုံးစာလုံးမှာ startmenu အစား nomutex ဆိုပြီး ရိုက်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ဂျီတော့ကို ၂ ခုမက ဖွင့်လို့ရပြီး ကြိုက်သလိုချက်လို့ရပြီပေါ့။
မိမိဆီလာတဲ့ အီးမေးကို ဘယ်ကလာသလဲ ရှာကြည့်မယ်
မိမိဆီလာတဲ့ အီးမေးလ်ကို ဘယ်ကလာသလဲ ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ Gmail,Yahoo mail နဲ့
Outlook mail တွေမှာ ရှာကြည့်မယ်။
အရင်ဆုံး mail log in လုပ်ရပါမယ်။
မိမိ သိလိုတဲ့ မေးလ်ကိုဖွင့်ပြီး ညာဘက်အပေါ်နားက
reply botton ကိုရှာကြည့်ပါ။
သူ့ဘေးမှာ တြိဂံဇောက်ထိုးပုံလေး တွေ့ပါမယ်။ အဲဒါလေး နှိပ်ပြီး show original ကိုရွေးလိုက်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့ technical page မှာ Ctrl+F နဲ့ “Received: from“ ကိုရှာလိုက်ပါ။
မေးလ်ပို့သူရဲ့ ip address ကိုတွေ့ရပါမယ်။
mail login ၀င်ရပါမယ်။
သိချင်တဲ့ မေးလ်ကိုဖွင့်ပြီး ညာဘက်အောက်နားက full header ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆို ip တွေ့ရပါပြီ။
Outlook mail ကိုဖွင့်ပါ။
view\_option ကိုသွားပြီး internet header box မှာ Ctrl+F နဲ့ “Received: from“ ကိုရှာလိုက်ပါဦး။
ရလာတဲံ ip ဟာ ဘယ်ကလာသလဲ ရှာကြည့်ပါမယ်။
ဒီဆိုဒ်က ip နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှာနိုင် သိနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ip address သိဘို့ လိုအပ်ခဲ့ရင် ဒီနည်းလေးက အထောက်အကူပြုမှာပါ
Gtalk အတွက် Auto Answering Aystem လုပ်လို့ရပါပြီ၊ Service မှာ MSN,ICQ,AIM,YAHOO,My Space အစရှိတဲ့ In-stant Messenger တွေအတွက်ပါ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်-
(1) အရင်ဆုံး ဒီ Link ကိုသွားလိုက်ပါ၊ http://answer.im/setupကိုသွားပါ၊
(2) Website သို့ရောက်ရှိပါက အသုံးပြုလိုသော IM Service တစ်ခုကို ရွေးရန်ဖြစ်သည်၊ Gtalk တွင်ပြုလုပ်လိုပါက Gtalk ကို ရွေးရန်ဖြစ်သည်၊
(3) Gtalk password နှင့် User name ကိုသုံးပြီး ၀င်ရန်ဖြစ်သည်၊
(4) မိမိလုပ်ချင်တဲ့ Online Status နှင့် Reply လုပ်စေချင်တဲ့ Message တို့ကို ရိုက်ရမည်၊ ယင်းနောက် Authorise People ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ၊ အားလုံးပြီးပါက Save Changes ကို Click လုပ်ပါ၊
(5) Changes Saved Your Answer Machine is Setup.You May exit Now ဟုပေါ်လာပါက General,Messages တို့၏ ဘေးတွင်ရှိသော Exit ကို Click လုပ်ပါ။မိမိသူငယ်ချင်းတွေခေါ်တာနဲ့ Auto Reply လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်၊ ကိုယ်မရှိတဲ့အချိန်တွေမှာ ပြောထားသမျှကို ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Click here to Return to the home page ဆိုတဲ့ စာမှ here ကို Click လုပ်ပါ၊ ပေါ်လာတဲ့ Page မှ Message ကို Click လုပ်ပါ၊ ဒါဆိုရပါပြီ။ အိုကေပါတယ်နော် အဆင်ပြေပါစေ
Gtalk တွင် ဂိမ်းကစားနည်း
MM Flashsongs မှာတင်ပေးထားတဲ့နည်းပညာလေးပါ....
1...sandbox ( http://talkgadget.google.com/talkgadget/sandbox )
ကိုသွားပြီး မိမိရဲ့ Gmail နဲ့Log In ၀င်လိုက်ပါ။
2.. ပြီးရင် မိမိ နဲ့ ဆော့လိုတဲ့ သူငယ်ချင်း ကိုလည်း Link လေး ပေးပြီး သူ့ ကိုလဲ ၀င် ခိုင်းလိုက်ပါ။
3..သူဝင်ပြီးပြီဆိုရင် သူနဲ့Chat နေတဲ့ Chat Box အောက်က Options > Start Application ကို Click ပါ။ အဲဒါကို Click လိုက်ရင် Enter the URL of the gadget ဆိုပြီးတွေ့ ပါမယ်။ အဲဒီမှာ အောက်က Game သုံးခုထဲက ဆော့ချင်တာကို ထဲ့ပြီး ကစားလို့ ရပါပြီ။
Chess : http://code.google.com/apis/talk/examples/chess.xml
Rock Paper Scissor : http://code.google.com/apis/talk/examples/rps.xml
Automatic Translation Application : http://code.google.com/apis/talk/examples/interpreter.xml
MM Flash Songsမှမျှဝေလိုက်သော "Computer Mouse Rught Click Background ထည့်နည်း"
ကဲ.....ဒီတခါ သူငယ်ချင်းတို့ ကို Software နောက်တခု့ ပေးမယ် ။
သူငယ်ချင်းတို့ကွန်ပျူတာမောက်စ်ကို Desktop ပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Folder တွေပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်
Right Click့ နှိပ်ရင် ပေါ်လာတဲ့Pop-up Menu မှာ သူငယ်ချင်းတို့ ရဲ့ စိတ်ကြိုက်ပုံလေး
ထည့်ကြည့်ရအောင် ။အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံစံလေး ဖြစ်သွားအောင်လုပ်မှာပါ ။
အသုံးပြုပုံလေးပါ ရှင်းပြလိုက်မယ်နော် ။ အရင်ဆုံး ဆော့ဝဲလ်လေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။
ရလာတဲ့ ဆော့ဝဲလ် Icon လေးကို Right click တချက်နှိပ်ပါ ။(မှတ်ချက် ။ Left click ၂ချက်မနှိပ်ပါနဲ့ ။အဲဒါဆို ဆော့ဝဲလ်က
အလုပ်မလုပ်ပါဘူး ။) ။ပီးရင်အဲဒီ Right click Pop-up Menu ထဲမှ ဒုတိယ အကြောင်း Run as administratorလေးကို ကလစ်လိုက်ပါ ။ဒါဆိုရင်
အောက်က ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း Software boxလေးပေါ်လာပါမယ်။
။ပီးရင်အဲထဲမှ Install Dll ဆိုတာလေးကို ကလစ်ပါ ။ OKဆိုပီး boxတခု ထပ်ပေါ်ပါမယ်။အောက်မှာပြထားသလိုပေါ်ပါလိမ့်မယ် ။
။ပီးရင် အောက်က Browse Image ဆိုတဲ့ အကွက်လေးကို ကလစ်ပါ ။ပုံထည့်ဖို့box တခု ထပ်ပေါ်ပါမယ် ။
သူငယ်ချင်းတို့ ထည့်မဲ့ ပုံရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ။အောက်ကပုံအတိုင်းလေးပေါ်ပါမယ် ။
ပုံထည့်ပါ။ပုံထည့်ပီးရင် အဲအကွတ်လေးမှာ သူငယ်ချင်းတို့ ထည့်တဲ့ ပုံပေါ်နေပါလမ့်မယ်။အနော်ကတော့အနော့အတဲလေးပုံ
ထည့်ထားတယ်........:D ။အောက်ကပုံ အတိုင်းဖြစ်နေရပါမယ် ။
ပုံထည့်ပီးရင် Apply ဆိုတဲ့ အကွတ်လေးကို ကလစ်လိုက်ပါ ။အောက်ကပုံလို box လေးပေါ်လာရင် okပေးလိုက်ပါ ။ဒါဆို ပီးပါပီ ။
ကပ်လျက်အောက်မှာရှိတဲ့(About နဲ့Restar Exploer)
ဆိုတဲ့ ၂ကွတ်ကတော့ နှိပ်ဖို့ မလို အပ်ပါဘူး ။နှိပ်လဲ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး သိချင်ရင်တော့ စမ်းကြည့်ပေါ့ ။အားလုံးပီးရင် အပေါ် Menu
ကြက်ခြေခတ်လေးကနေ ဆော့ဝဲလ်ကို ပိတ်လိုက်လို့ ရပါပီ ။ပီးရင် Folder လေးတခုပေါ် Right Clickထောက်ကြည့်လိုက်ရင်
သူငယ်ချင်းတို့ ထည့်ထားတဲ့ ပုံလေးကို မြင်နေရမှာပါ ။အောက်မှာ ကျနော်ထည့်ထားတဲ့ ပုံလေးကို Right Click လုပ်ရင်ပေါ်တဲ့
ထည့်ထားတဲ့ ပုံမကြိုက်လို့နောက်ထပ်ပုံပြောင်းချင်တယ်
ဆိုလဲ ဆော့ဝဲလ်လေးကို အပေါ်ကပြောထားတဲ့ အတိုင်း ပြန်ဖွင့် Browse Image ကိုကလစ်ပီး စိတ်ကြိုက်ပုံပြောင်းထည့်
ပီးရင် Apply ပေးလိုက်ရုံပါပဲ ။ကဲ....ဒါဆို အားလုံး အိုကေသွားပါပီ ။ပုံထည့်ရင် အရောင်ဖြော့တဲ့ ပုံလေးတွေထည့်ရင် ပိုလှမှာပါ ။
ရှင်းတာ ရှင်းပြတာ ကိုယ့်ဘာကိုယ်လုပ်တတ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ကျနော်ရှင်းပြတာမှ ပိုရှုပ်နေမလား မတိဝူး ..........:D ။
။ဒေါင်းဖို့ အောက်မှာ Link၂ခုပေးထားပါတယ် ။
ဆော့ဝဲလ်လေးက Portable ဆိုတော့ သုံးရတာ ပေါ့ပါးတာပေါ့ဗျာ ။ဒေါင်း၇တာလဲ မကြာပါဘူး ။
နက်ကောင်းရင် ၁ မိနစ်လောက်နဲ့ရတယ် ။မကောင်းရင်တော့ ၅ မိနစ်လောက်ပေါ့ ။
အားလုံး ပဲ ကြိုက်ကြမယ် အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ။
ဒါတွေကိုစုစည်းတဲ့အခါ စနစ်တကျ လွယ်လွယ်ကူကူ တစ်စုတစ်ဝေးတည်းထားနိုင်ပြီး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်တူရာ နာမည်တွေ တပ်ပေးထားနိုင်ပါသေးတယ်၊ အဲဒီမှာ ထူးခြားတာက မှတ်စုထဲမှာ Website တွေမှတ်တဲ့ Link အဖြစ် တခါတည်းပေါ်နေလို့ ပြန်ဖွင့်ချင်ရင် ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပါဘဲ၊ အဲဒီလိုဘဲ ဖိုင်တွေကိုလည်း တစ်ပါတည်း ခေါ်ထည့်ထားနိုင်လို့ ကိုယ်ဖွင့်ချင်တဲ့နေ့၊ သုံးချင်တဲ့အခါမှာ အဲဒီဖိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တခြားကို ထပ်သွားဖို့မလိုတော့တာမျိုးပါ၊ အဲဒီလိုအသုံးဝင်တာတွေ အများကြီးထပ်ရှိသေးတဲ့ Notebrowser ကိုသုံးချင်ရင်တော့ www.notebrowser.com မှာအခမဲ့ အသုံးချနိုင်ပါတယ်၊ ဦးနှောက်ထဲမှာ သိမ်းထားရတာတွေကို Desktop ပေါ်မှာ ပစ်ချထားလိုက်လို့ ရပါပြီ။
Facebook ပေါ်မှာ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ စာသားတွေ ရေးချင်သလား ?
Facebook မှာ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ရုပ်ပုံစာသားလေးတွေနဲ့ Wall Post တွေ ရေးသားနိုင်မယ့် Facebook Application တစ်ခု ရှိပါတယ်။
အဲဒါက Text Effects ပါ၊ Trxt Effects မှာ Emoticons,Smiley,Pictures,Alphabet,Effects,Symbols စတဲ့ ကဏ္ဍတွေထဲက နှစ်သက်ရာ ပုံလေးတွေကို ရွေးချယ်ပြီး သတင်းစကားလေးတွေ ရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Text Effects မှာ သတင်းတွေရေးသားပြီး သူငယ်ချင်းတွေဆီကို ပေးပို့ချင်တယ်ဆိုရင် Send toafriend's Wall ဆိုတဲ့ဘေးမှာ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း နာမည်ကိုရိုက်၊ ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ပေးပို့နိုင်မှာပါ။
အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး Effect အသစ်တွေလည်း အခါအားလျော်စွာ တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Text Effects ကို အောက်ပါလင့်မှာ ၀င်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Account နှင့် Password ခိုးယူခြင်းမှ ကာကွယ်နည်း(၃)နည်း
ဂျီမေးလ် အကောင့်များ ခိုးခံရမှု၊ data များ ဖျက်ဆီးမှု၊ ပျောက်ဆုံးမှု၊ မေးလ် password များခိုးယူမှုများမှ လျှော့နည်းစေရန် နည်းလမ်း ၃ လမ်းဖြင့် ကာကွယ်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း အိုင်တီ ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ သိရှိရသည်၊
မိမိဂျီမေးလ် လုံခြုံမှုရှိရန်အတွက် ပထမအဆင့်တွင် HTTP(Hypertext Transfer Protocol)ထက်ပိုပြီးလုံခြုံတဲ့ HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)ကိုပြောင်းရမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်၊
ပထမအဆင့်အနေဖြင့် မိမိအကောင့်ထဲကို Sign up ၀င်လုပ်ရမှာပေါ့၊ ပြီးမှ ကိုယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ မေးအကောင့်ဘေးနားက setting ကိုဝင်ပြီးရင် General မှာကလှစ်နှိပ်၊ နောက် Browser Connection မှာ Always use https လို့ မှတ်ပေးလိုက်၊ နောက်ဆုံးအလုပ်ကတော့ အောက်ဆုံးက save changes မှာ ကလှစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင် ပြီးပြီ၊ အဲဒါဆိုရင် မိမိမေးလ်အကောင့်ကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ http:// မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ လုံခြုံတဲ့ https://နဲ့ဖွင့်ပြီးသား ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်၊
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ မိမိ Password ကို Password Recover လုပ်ပြီး အခိုးမခံ ရရန်ကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ မိမိမေးလ်အကောင့်ကို မေးလ်အသစ်စဖွင့်ကတည်းက Recovery တွင် သူငယ်ချင်းမေးလ်ကိုပေးတတ်သောကြောင့် အခိုးခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်၊ မိမိမေးလ်ကို အရင်ဖွင့်ပါ၊ ပြီးမှ Setting ထဲကိုသွား Account and Import မှာရှိတဲ့ Google Account setting ကိုရှာ၊ အဲကနေပြီး Visit your Google Account setting မှာကလှစ်နှိပ်လိုက်ရင် အဲမှာ Personal Settings ဆိုတာပေါ်လာမယ်၊ အဲဒီစာကြောင်းအောက်က Change password recovery options မှာကလှစ်နှိပ်ပြီးရင် မိမိကြိုက်တဲ့ Recovery အကောင့်ကို ပေးလို့ရတယ်၊ အဲလိုကိုယ်စိတ်ချရတဲ့ မေးလ်အကောင့်ကို ပေးရင်လည်းအခိုးမခံရတော့ဘူ၊
တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ မိမိ Password ကိုကိုရိုးရိုးအမည်ပေးခြင်းမပြုလုပ်ရန်၊ Password ၇ိုက်ထည့်ရာတွင် အမည်စာလုံးအပြင် အခြား %,*,& အစရှိတဲ့ အက္ခရာမျိုးနှင့် ဂဏန်းများကြားညှပ်၍ ရိုက်ထည့်ခြင်းသည် ရိုးရိုးအမည်ရိုက်ထားသောအကောင့် Password ထက်လုံခြုံမှုရှိကြောင်း သိရပါသည်၊
အင်တာနက်သုံးစွဲသူများသည် မိမိData များထည့်ထားသော Stick ကိုအင်တာနက်ဆိုင်များတွင် တပ်ဆင်ပြီး အသုံးပြုပြီးလျှင်လည်း Start မှ run ကိုသွားပြီး recent ရိုက်ထည့်ပြီး အကုန် Delete လုပ်ပြီးမှ စက်ပိတ်ခြင်းဖြင့် မိမိဖွင့်ခဲ့သော Data များကို အခြားသူတစ်ဦးမှပြန်ကြည့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသောကြောင့် သုံးစွဲသူများ သတိရှိနိုင်ရန် ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်-
Photo အား ကြည့်မရအောင် ဖျက်နည်း ကွန်ပျူတာဖိုင်များမှာ Header Code တွေပါတယ်၊ အဲဒီ Header Code တွေက Hex number တွေ ဖြစ်ပါတယ်၊ Hex number ဆိုတာက0to F (0,1,2....9,A,B,...F)တွေဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီ Header Code တွေကို ပြောင်းလိုက်ရင် အဲဒီဖိုင်တွေကို ဖွင့်မရတော့ပါဘူး၊ အဲဒီယူဆချက်ကိုသုံးပြီးတော့ Jpeg ဖိုင်တွေရဲ့ Header Code ကို ပြောင်းရင် အဲဒီ Jpeg ဖိုင်တွေဟာဖွင့်မရတော့ဘူးလေ၊ သူများမမြင်စေချင်တဲ့ကိုယ့်ဓာတ်ပုံတွေကိုဒီနည်းလမ်းသုံးပြီး ဘာဆော့ဝဲမှမလိုဘဲ ဖျောက်လို့ရပါတယ်-
(၁) Start ကနေ Run ကိုသွားပါ၊ cmd လို့ရိုက်ထည့်ပါ၊
(၂) အနက်ရောင် Command Prompt Window ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်၊
(3) debug"You Picture File Location"လို့ရိုက်ထည့်ပါ၊ ဥပမာ သင့်ပုံက D:/ထဲမှာ ရှိပြီး File vame က mypic.Jpg ဆိုရင် debug D:/mypic.jpg လို့ရိုက်ထည့်ပါ၊ ပြီးရင် Enter ခေါက်ပါ၊
(၄)e100 လို့ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ၊
(၅) ဥပမာ-1381:0100 FF လို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်၊အဲဒီမှာ FF ဆိုတာ မူရင်း Header Code ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒါကို သေချာမှတ်ထားပါ၊ ပြီးရင် AA လို့ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ၊ AA လို့မရိုက်ချင်ရင်လည်း 00,11,22,......FF ထဲကနေ ကြိုက်တာကိုရိုက်ပါ၊ ဒါပေမယ့် မူရင်း Header Code ကိုတော့ရိုက်လို့မရဘူး၊
(၆) W ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ၊
(၇) Writing xxxxxxx bytes ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ ဥပမာ-Writing OB 586 bytes
(8)9လို့ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်ပါ၊
(၉) ပြီးရင် Exit လို့ရိုက်ပြီး Enter နှိပ်လိုက်ရင် Command Prompt ကနေ ထွက်ခွာသွားပါလိမ့်မယ်၊ ပြီးသွားပါပြီ၊ ကြိုက်တဲ့ Picture Viewer နဲ့ကြည့်ပါ၊ လုံးဝမရပါဘူး၊
(၁) အပေါ်က အဆင့်အတိုင်း အဆင့်(၄)ထိ သွားပါ၊
(၂) အဆင့်(၅)မှာ Header Code ကိုပြန်ထည့်ပေးပါ၊ ပြီးရင်ကျန်အဆင့်တွေ အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
Card Cloud ကနေ ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ iphone,Android နဲ့ ဖုန်းတော်တော်များများမှာ လိပ်စာကတ်လှလှလေးတွေဖန်တီးနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အပြင် Card Cloud သုံးစွဲသူအချင်းချင်းရဲ့ ပြောင်းလဲသွားတဲ့လုပ်ငန်း၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ လိပ်စာတွေကိုလည်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်၊ ဖုန်းအချင်းချင်းပို့လို့ရသလို အီးမေးလ်တွေဆီကိုပါ ဖုန်းကနေတဆင့် လိပ်စာကတ်လှလှလေးတွေ ပို့လို့ရပါသေးတယ်၊ Card Cloud မှာအကောင့်ဖွင့်ထားသူတွေက http://i.cardcloud.com ဆိုတဲ့လင့်မှာ Log in ၀င်ပြီးဒေါင်းလုပ်ချနိုင်သလို Card Cloud မသုံးသူတွေကတော့ http://market.android.com/details?id=com.cardcloud.android မှာ သွားရောက်ရယူနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်မအားလို့ ဖုန်းဆက်လာတဲ့သူကို အဆင်ပြေအောင်ဖြေရှင်းပေးမယ့် Auto SMS ဆိုတဲ့ Freeware ပါ၊ ဒီဆော့ဝဲကတော့ အင်တာနဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ဖုန်းတွေမှာသုံးတာပါ၊ ကိုယ်တကယ်မအားဖြစ်မှသာ ကိုယ်ပြန်လိုတဲ့မက်ဆေ့ကို ရိုက်ထည့်ပြီးဒီဆော့ဝဲကိုဖွင့်ထားဖို့ပါ၊ နောက်မို့ဆိုဆက်သမျှဖုန်းတွေကို မက်ဆေ့ပြန်ပို့နေလို့ ပိုက်ဆံကုန်ဖို့တော့ရှိနိုင်ပါတယ်..မက်ဆေ့တိုင်းကို အသံထွက်ပြတဲ့စံနစ်ပါရှိပါတယ်၊ ဒီဆော့ဝဲကို သုံးချင်ရင် http://www.brothersoft.com က 1Mobile Market Download,က Applications Categories ထဲက Auto SMS ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်မှာ ချက်ထားတာတွေပြန်ကြည့်ချင်ရင် ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချက်ထားတာတွေကို ပြန်ကြည့်ချင်ရင် မော်ဇီလာဘလောက်ဇာမှာ Facebook Chat History Manager Add-on တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်၊ http://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/facebook-chat-history-manager/ ကိုဖွင့်ပြီး Add-on ကိုအင်စတောလုပ်ရမှာပါ၊ အင်စတောလုပ်ပြီး ဘရောက်ဇာဖွင့်ထားရင် Restart ချလိုက်ပါ၊ ဘရောက်ဇာပြန်ပွင့်လာရင် Menubar မှာရှိတဲ့ tool ကိုကလှစ်နှိပ်ပါ၊ Facebook chat history Manager ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်၊ Facebook chat history Manager ထဲကမှ Get Facebook ID ကိုကလှစ်နှိပ်ပါ၊ ပြီးရင် Close Login Window ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ကိုယ့်အတွက် ID ကိုဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်၊ မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်၊ Facebook chat history Manager ထဲက Create Account ကိုရွေးပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Username နဲ့ Password ကိုပေးလိုက်ရင် ကိုယ့်ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်မှာ ချက်ခဲ့တာတွေကို ပြန်ကြည့်လို့ရမှာပါ။